ဆိုင်မွန်(ဗဟုသုတများ): အမျိုးသား တွေက ရှောင်ရှား သင့်တဲ့ မိန်းမများ
အမျိုးသား တွေက ရှောင်ရှား သင့်တဲ့ မိန်းမများ
1. မျက်နှာများသော / လော်လီသော မိန်းမ
မျက်နှာ များသော၊ လော်လီသော၊ ယောက်ျား တို့တွင် ပျော်ရွှင်သော မိန်းမတွေကို အမျိုးကောင်းသားတို့ ရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရှောင်ရှားသင့် သလဲ မမေးပါနဲ့။ အဖြေက တစ်လုံး တည်းပါ။ စိတ်မချ ရလို့ပါ။ မျက်နှာ များတယ် ဆိုတာ ရည်းစား များတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကို မျက်စောင်း မထိုးကြပါနဲ့။ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူများပစ်လို့ ကျန်နေခဲ့ရတာ ဆိုရင်လည်း တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ များတာ အပြစ် မပြောလိုပါ။ တစ်ချို့ကကျတော့ အဲဒီထက် များတယ်။ အဲသလောက်
မျက်နှာများတဲ့ မိန်းမကို ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ သင်နဲ့ ရမယ့် ကလေးတွေရဲ့ မိခင် ဖြစ်စေ မှာလဲ။ ဒါ အဖြေက ရှင်းပါတယ်။
2. လက်ဖွာသော မိန်းမ
လက်ဖွာတယ် ဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေး အသုံးအနှုန်းမှာ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ မသုံးတာ ပါဘဲ။ ကျွန်တော် တစ်ခါက တွေ့ဖူး သေးတယ်။ တံငါသည် လင်မယားပေါ့။ အသုံးအစွဲ ကြီးသော မိန်းမ ယူမိလို့ ကတော့ တစ်သက်လုံး အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက် ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာက ဒါန လုပ်တာကို အပြစ် မပြောလိုပါ။
3. အရပ်တကာလည်တတ်သော မိန်းမ (သို့) ပွဲလန်းသဘင် ခင်တွယ်လွန်းသော မိန်းမ
ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၁၂) ရာသီ မပြတ်ပါဘူး။ ရှေးဆရာတွေ ရေးခဲ့တဲ့ စာပေထဲမှာ ဇာတ်ပွဲ မက်သူတွေဟာ အဲဒီ ဇာတ်အဖွဲ့ သွားပြီး ကတဲ့ ရွာစဉ်လိုက် အားပေးတာတွေ ရှိတယ် လို့တောင် သိရပါတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ အများစုက အမျိုးသမီးတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ အခုလည်း အပျော် အပါးကို တော်ရုံမက်ပါ။ အရပ်ထဲလည်ပြီး အတင်း တုတ်တာလည်း လျှော့ပါ။ မြို့ကြီး ပြကြီးလို နေတဲ့ မိန်းမတွေ ထဲမှာတော့ ကလပ် အမြဲတမ်း လိုလို တက်တာတို့၊ အိမ်လည်ထွက်
တာ များတာတို့ တွေလည်း ပါဝင် ပါတယ်။ လင်တို့ မယားတို့ ဘ၀မှာ တစ်ခြား ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် လုပ်စရာတွေ ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။
4. မောက်မာလွန်းသော မိန်းမ
မောက်မာတယ် ဆိုတာ စကားလုံးလေး လှအောင် သုံးထား တာပါ။ အမှန်တော့ ရိုင်းစိုင်းပါတယ်။ လူကြား သူကြားထဲ ငါနဲ့ ကော်ဆဲ တာမျိုး၊ ရှက်ရ ကောင်းမှန်းမသိ ထဘီလှန်ပြ တာမျိုး၊ ကတ်ကတ်လန် နှုတ်လန်ပြန်ထိုး တာတွေဟာ မိန်းမတွေ အဖို့ အတော်လေး တန်ဖိုးကျစေတဲ့ အပြုအမူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ မိန်းမတွေကို ငါးစိမ်းသည်နဲ့ နှိုင်းကြပါတယ်။ ငါးစိမ်းသည်တိုင်း မရိုင်းပါ။ ဒါပေမယ့် စာနဲ့ ရေးပြဖို့ မတော်လောက်အောင် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ သူတွေ တစ်ပုံကြီး ရှိပါတယ်။
5. လောင်းကစားလုပ်သော မိန်းမ
တစ်ချို့ မိန်းမတွေ ထဘီကြီး ရင်ခေါင်းတင်ပြီး ဖဲရိုက် ကြက်တိုက် လုပ်ကြတာ တောဘက်မှာ တွေ့ဖူး ပါတယ်။ မြို့သူများကတော့ ၀တ်ကောင်းစားလှလေး ၀တ်ပြီး ဂျင်ဝိုင်း ကာစီနိုဝိုင်း ပိုကာဝိုင်း သွားကြ တာပေါ့။ နောက်ပြီး နှစ်လုံး သုံးလုံး ကစားတာ တွေဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ကောင်းကျိုးမပေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မိန်းမကြီး တန်မဲ့ ဘောလုံးပွဲ ၀င်လောင်းတာ တွေတောင် တွေ့ရဖူး ပါတယ်။
6. ပျင်းရိလွန်းသော မိန်းမ
တစ်ချိ့ အရမ်းပျင်း လွန်းတဲ့ မိန်းမတွေ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် ပျင်းသလဲဆိုရင် ၀တ်ပြီးသား ထဘီ လျှော်ဖို့ နေနေ သာသာ ချွတ်ပြီး အကွင်းလိုက် ပုံထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ကကျတော့ ပျင်းလွန်းတော့ ထူ၊ ထူလွန်းတော့ န၊ နလွန်းတော့ အ-ဆိုသလို တစ်နေကုန် ထိုင်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ပဲ မှိုင်နေတဲ့ မိန်းမတွေလည်း အများသားပါ။ အဲဒီလို မိန်းမမျိုး ကိုယ့်ဆရာ ယူမိလို့ ကတော့ ထဘီတွေ အတွင်းခံတွေ လျှော်ပေးဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။
မိန်းမပေါ့ ဆိုတာ မိန်းမပျက်ကို ပြောတာပါ။ ဒါဆို ပြည့်တန်ဆာမ တွေက ယောက်ျား မယူရတော့ ဘူးလား၊ ကလေး မမွေးရတော့ ဘူးလား မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ဒါက သူတို့ အခွင့် အရေးပါ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတို့ ရွေးချယ်တဲ့ အခါ ဘာကြောင့် ရှောင်ကြဉ်သင့် တာလဲဆိုတာ ပြောပါရစေ။ မွေးလာတဲ့ ကလေး မျက်နှာငယ်မယ်၊ လူတော မတိုးဘူး၊ သင့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုလည်း တစ်စတစ်စ ကျဆင်း စေမယ်၊ ပိုအဆိုးဆုံးက မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေက အကြောင်းမလှလို့ သင့်ရုပ်ရည်နဲ့ မတူဘူး
ဆိုရင် ငါနဲ့ ရတဲ့ ကလေးမှ ဟုတ်ရဲ့လား-လို့ သံသယတွေ ပွားရမယ်။ ဒါတွေ အတွက် မယူသင့်တဲ့ မိန်းမထဲမှာ သူတို့ကို ထည့်ရတာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
From : နတ်စည်တော် (Myanmar Online Media)
Posted by Te Tee at 4/02/2017 10:14:00 PM